Heshiis Cusub oo laga gaaray arrimaha Jubbooyinka – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Heshiis Cusub oo laga gaaray arrimaha Jubbooyinka
Waxaa saacadihi la soo dhafay Deeganka Gobweyn ka socday Shir 3 gesood ah kaas oo u dhexeyay Dowlada Somalia , IGAD iyo Isbahaysiga Nabada iyo Midnimada Gobolada Jubboyinke ee uu hormuudka u yahay Col Barre Adan Shire Hiiraale.
Heshiiskaan cusub ayaa waxaa u awooda saarayaa wadasheyn dhexmari doonta Ciidamada Amisom ee kala ah Burundi iyo Siraaliyoon iyo Ciidamada Isbahaysiga Nabada iyo Midnimada Gobolada Jubboyinka.
Sido kale Heshiiskaan ayaa waxaa u dhigaya in Gawaarida dagaalka ee RW Abdiweli uu horay ugu soo dhibay Maaamulka Jubba qayb ahaan lagu soo wareejiyo Ciidamada Isbahaysiga Nabada iyo Midnimada Gobolada Jubboyinka.
Dhamman qodobadaasi iyo qodobo kale way isku fahmeen dhinacyadii maanta ku kulansanaa deegaanka Goobweyn ee Duleedka Kismaayo, waxaana intii u shirka lagu go’amiyey in ciidamada Isbahaysiga ay maalinta sabtida ah 10:oo galan magaalada Kismaayo, Waxaana arrintaasi keentay kadib markii shirkii maanta Goobweyn uu noqday mid aad la isugu daahay wadahadalka kadibna uu waqtigu noqday xilli maqrib ah oo aan ciidamada soo geli karin.
Heshiiskan ayaa waxaa Dowlada Somalia u saxiixay Wasiirka Arimaha Gudaha Somalia, Cabdilaahi Goodax Barre dhanka IGAD waxaa uu saxiixay Ambasador Maxamed Cabdi Afey , halka Isbahaysiga uu u saxiixay Wasiirki hore ee gaashandhiga Soomaaliya ahna guddoomiyaha Golaha Nabada iyo Midnimada Soomaaliya Col Barre Adan Shire hiiraale.
Heshiskan cusub kadib dhammaan wafdigii waxay kusoo noqdeen magaalada Kismaayo oo ay markii hore ka tageen. Waxaa la sugaana waa Col, Barre Hiiraale oo berri subax soo gala Kisma
Previous Odayaasha Dhahar oo mar kalle ka hadlay shirka xingallool
Next Ciidamada dowlada iyo kuwa Amison oo dagaal balladhan ugu jihaystey Baraawe